ဖြည့်စွက်ဆေးကဲ့သို့ အာဟာရဖြစ်စေသော အစားအစာများ – ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဒေါက်ခွရွက်၊ တရုတ်ဂေါ်ဖီထုပ်နှင့် ဘီတွတ်ဥတို့တွင် ခန္ဓာကိုယ်၏ သွေးလည်ပတ်မှုကို အားကောင်းစေပြီး နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်သည့် နိုက်ထရစ်အက်စစ်များ ပါဝင်သည်။
ကိုက်လန်၊ ဒေါက်ခွရွက်၊ ကြက်ဥ စသော အစားအစာများတွင် အမြင်အာရုံကို အားကောင်းစေနိုင်ပြီး မျက်စိ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်သည့် အာဟာရဓာတ်များ ပါဝင်သည်။
ပဲများ၊ အစေ့အဆန်များ၊ ပဲနီလေးနှင့် ဖွဲနုတို့တွင် အစာချေ ဖျက်မှုစနစ်ကို အားကောင်းစေသော အာဟာရ ဓာတ်များ ပါဝင်သည်။
ကညွတ်၊ မက်မွန်သီးနှင့် နနွင်းတို့တွင် ခန္ဓာကိုယ်ရောင်ရမ်းမှုများကို သက်သာပျောက်ကင်းစေသော အာဟာရဓာတ်များ ပါဝင် သည်။
ဂရင်းတီးလက်ဖက်ခြောက်တွင် စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့ပါးစေပြီး စိတ်တည်ငြိမ်မှုကို အားကောင်းစေနိုင်သည့် အမိုင်နိုအက်စစ် ပါဝင်သည်။
ဆယ်လ်မွန်ငါး၊ ထောပတ်သီး၊ သင်္ဘောသီး၊ အာလူး၊ စွန်ပလွံသီးတို့တွင် သွေးထဲရှိ ဆိုဒီယမ်ပမာဏကို ထိန်းညှိပေးနိုင်သော ပိုတက်ဆီယမ် ပါဝင်သောကြောင့် သွေးတိုးမဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်သည့် အစားအစာ များ ဖြစ်သည်။
အဆစ်အမြစ်နာကျင်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့် ကြွက်သားများ နာကျင်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် မဂ္ဂနီဆီယမ် ပါဝင်သော အစားအစာများ စားပေးသင့်သည်။
← ကားလမ်းထက်တွင် ဇိမ်ခံရွက်လှေစီး နေရသကဲ့ သို့ရသကို ပေးစွမ်းမည့် မာစီဒီးကားသစ် FEATURED
နိုင်ငံရေးပါတီများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး →
ကင်ဆာဆဲလ်များကို သေစေနိုင်တဲ့ အံသြဖွယ် အစွမ်းနဲ့ ဖျော်ရည်….!
August 22, 2017 USDP 2016 Comments Off on ကင်ဆာဆဲလ်များကို သေစေနိုင်တဲ့ အံသြဖွယ် အစွမ်းနဲ့ ဖျော်ရည်….!
March 8, 2018 USDP 2016 Comments Off on ကျောက်ကပ် ကျန်းမာရေးအတွက် ကြက်မောက်သီးစားပါ
May 5, 2017 USDP 2016 Comments Off on သင့်အသက်ကို ဖြေးဖြေးချင်း ခြွေယူနေတဲ့ အစားအစာ (၄) မျိုး